Arrin ceeb weyn ku ah Maamulka Gobolka Banaadir oo keentay inuu is casilo Agaasimihii Waaxda dab damiska ee Maamulkaas! - Caasimada Online
Home Warar Arrin ceeb weyn ku ah Maamulka Gobolka Banaadir oo keentay inuu is...
Arrin ceeb weyn ku ah Maamulka Gobolka Banaadir oo keentay inuu is casilo Agaasimihii Waaxda dab damiska ee Maamulkaas!
Muqdisho (Caasimada Online) – Warar goor dhaw soo gaaray xafiiska war qabada Shabakadda Caasimadda Online ee magaalada Muqdisho ayaa xaqiijinayo inuu is casilay Banaadir C/llaahi Maxamed Cabdulle (Saney) Agaasimihii Waaxda dab damiska, Solar-ka iyo Korontada Gobolka Banaadir.
Sababta ugu weyn ee keentay inuu is casilo ayaa lagu sheegay markii ay mushaar waayeen shaqaalihii ka shaqeenayey xafiiskiisa.
Wuxuu saxaafadda u sheegay inay muddo ku dhabar adeegeen adeegga bulshada iyagoo aan wax mushaar ah qaadan ayuu sheegay inay isaga iyo shaqaalihiisa go’aan ku qaateen inay shaqada isaga tagaan
Wuxuu maamulka Gobolka Banaadir ku eedeeyey inay iska indha tireyn sidoo kalana ay dhaga ka laabteen xuquuqdii shaqaalihiisa ay xaq u lahaayeen.
Maamulka Gobolka Banaadir ayaa lagu eedeeyey inaysan shaqaalaha maamulkaas hooos imaado wax mushaar ah aysan siinin bilooyinkii ugu dambeeyey taasoo keentay inay shaqadooda gabaan shaqaala badan.
Howlihii adeegga ee laga rabay dowladda Hoose ee xamar ayaa waxaa qabto shirkadda si gaar ah loo leeyahay oo lagu wareejiyey, sidoo kalana maamulka Gobolka Banaadir ayaa ku guul dareystay inay ka hor tagaan musiibooyinka Muqdisho ka dhaco oo ay ugu horeyso dab markasta kusoo noq noqday Suuqa Bakaaraha.